Etazonia : Vonona hanohana ny fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaEtazonia : Vonona hanohana ny fifidianana
30/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mijanona ho isan’ireo mpiara-miombon’antoka lehibe indrindra ho an’i Madagasikara i Etazonia. Ho an’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena hatao eto Madagasikara, izay efa fantatra fa tanterahina amin’ny faha-7 novambra 2018, dia vonona hanohana antsika izy ireo. « Ny fandraisana anjaran’i Etazonia dia amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola amin’ny maha mpiara-miombon’antoka aminy. Vonona izahay hanome ny anjara birikinay. Mirary koa izahay ny hahavitan’izany fifidianana ara-demokratika sy eken’ny rehetra izany », hoy ny fanehoan-kevitry ny mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho Amerikana Stuart Wilson.
Nandritra ny lanonana fanamarihana ny faha-151 taonan’ny fahaleovantenan’ny Etazonia, dia notontosaina omaly tetsy amin’ny ivon-toeran’ny Masoivoho Amerikana eto Antananarivo etsy Andranomena no nanambarany izany. Niompana indrindra tamin’ny fifidianana rahateo ny lohahevitry ny fankalazana tamin’ity taona ity. Nandritra izany no nampirantiana ireo dingana maro nolalovan’i Etazonia teo amin’ny sehatry ny fampielezan-kevitra ara-politika sy ny fifampiandanian’ireo kandida hofidiana kanefa dia tsy niteraka ady saritaka na fifandrafiana.
Nivoitra tamin’ny kabary izay nataon’i Stuart Wilson fa azo hatao tsara ny mampandroso ny firenena na dia ao anatin’ny tsy fitovian-kevitra aza ny mpanao politika. Noraisiny ohatra tamin’izany ny tantaran’i John Adams sy Thomas Jefferson. Mpiara-mitolona ho an’ny fahaleovantenan’i Etazona izy mirahalahy ireo tany am-boalohany, ary taty aoriana dia samy lasa diplomaty, ny iray niasa tany Paris ary ny iray tany Londres. Samy hafa anefa ny toetran’izy ireo ka na dia teo aza ny fitiavan’izy ireo an’i Etazonia dia nanjary mpifandrafy tsy nifandevi-maty ampolo taona izy ireo taty aoriana. Rehefa samy avy nitana ny toeran’ny Filoham-pirenena anefa izy ireo dia nanomboka nihavana. Nisy ny fifanakalozana taratasy nifampizarany ny zava-nitranga tany amin’ny lasa sy ny vina ho an’ny ho avy mamiratra ary dia niverina nifankahazo am-po sy mpinamana. Ny tena mpisakaiza dia tsy voatery hitovy hevitra foana saingy tsy maintsy mahita fomba hihoarana an’izay antony mampifanditra.
Io fotokevitry ny fioharana amin’ny fahasamihafana na ara-potokevitra na amin’ny lafiny hafa io no hafatra goavana nampitain’i Stuart Wilson tamin’ireo mpanao politika malagasy tonga marobe nanotrona ity fankalazana ny fetim-pirenena Amerikana tetsy Andromena omaly ity. Voasolo tena tao avokoa ireo hery politika misy eto amintsika, ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc mivady, ny filohan’ny Antenimierandoholona no sady filoha nasionalin’ny antoko Hvm Rivo Rakotovao, ry Augustin Andriamananoro minisitry ny Jono avy amin’ny vondrona Mapar.
Mikasika ny raharaham-pirenena kosa indray dia nanantitratitra ny mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho Amerikana Stuart Wilson fa tsy manohana kandidà akory Etazonia. Ny rindran-damin’ny demokrasia arahin’ny mpanao politika no tohanany. Midera ny ezaky ny mpanao politika malagasy sy ny mpitondra kosa izy tamin’ny fivahan’ny krizin’ny fanehoan-kevitra teo iny. « Zava-dehibe rehefa voavahan’ny malagasy samy malagasy iny krizy politika nateraky ny hetsiky ny depiote tamin’ny 21 aprily iny », hoy ny fanazavany. Ny lafin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny fanampiana kosa indray dia mbola nanamafy ny fanohanany an’i Madagasikara i Etazonia. Efa misy tetikasa fito natomboky ny Usaid amin’ity taona ity miteti-bidy 200 tapitrisa Dolara, ankoatra izay efa nataony hatramin’izay. Notsiahiviny fa Etazonia no isan’ireo firenena nanampy betsaka indrindra an’i Madagasikara. Raha ny tamin’ny 2017 fotsiny dia manodidina ny 100 tapitrisa Dolara ny fanampiana natokany ho antsika.
Ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina kosa no nisolo tena ny Fitondram-panjakana tamin’ity lanonana ity. Nanamafy ny tenany fa vonona i Madagasikara hanamafy ny fiaraha-miasa amin’i Etazonia. Nisaotra an’i Etazonia izy tamin’ny fanampiana manokana ny tafika malagasy, ka lehibe indrindra amin’ireny ny fanomezana vatsim-pianarana ho an’ireo telo mianadahy mandranto fahalalana any amin’ny Akademia miaramila Amerikana, ka anisan’izany ilay “élève-officier” vehivavy voalohany indrindra hiditra ao amin’ny United States Air Force Academy any Colorado.